काठमाडौंमा अब एमाले बलियो होला कि राप्रपा ? - Namaste Post
काठमाडौंमा अब एमाले बलियो होला कि राप्रपा ?
नमस्ते पोस्ट २०७३, २८ पुष बिहीबार १२:३६ 0
२८ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पुस २२ गते राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गर्‍यो । आगामी चुनावमा काठमाडौंको जनमत आफूतिर तान्ने एमालेको रणनीतिअनुसार उसले यो जनप्रदर्शन आयोजना गरेको थियो ।
कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले पुस २७ गते भृकुटीमण्डपमा पृथ्वीजयन्तीको अवसर पारेर चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । वर्षैपिच्छे आयोजना हुने यो चियापानमा एमालेको सभामा जस्तो जनसहभागिता त थिएन, तथापि त्यहाँ कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्षनेताले राप्रपाको एजेण्डाको प्रशंसा गरे । पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दिइनुपर्ने राप्रपाको मागमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत समर्थन जनाए ।
माथि सहकार्य, तल प्रतिस्पर्धा
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कमल थापा उनको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री थिए । ओलीका मुख्य सारथी बनेका थापाले अन्तिम घडीसम्म केपी ओलीलाई साथ दिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा उठेका प्रचण्डलाई संसदमा भोट हालेनन् । नाकाबन्दी खुलाउन भारतसँग कुरा गर्नेदेखि चीनसम्म गएर ओली सरकारको पक्षमा वकालत गर्ने काम थापाले गरे । यो सबै परिघटनाले ओली र थापावीच राम्रो सम्बन्ध रहेको देखायो ।
अहिलेसम्म पनि राप्रपा नेता कमल थापाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई काँध हालिसकेका छैनन् । भलै मधेसको मामिलामा केपी ओलीलाई जति अनुदार र कडा बताइन्छ, कमल थापा तुलनात्मकरुमा लचिलो र नरम रहेको बताइने गरेको छ ।
यो स्थितिमा घोषित-अघोषित सहकार्यको अवस्थामा रहेका एमाले र राप्रपावीच राजनीतिक एजेण्डाको तहबाट समेत राष्ट्रवादी जनमतलाई आफूतिर तान्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा रहेको भारतविरोधी र एक प्रकारको पहाडे समुदायको जनमतलाई कसरी ‘क्यास’ गर्ने भन्नेबारेमा केपी ओली र कमल थापा निकै सतर्क देखिएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा पनि यहाँको राष्ट्रवादी जनमतलाई जसरी एमालेले आफ्नो प्रभावमा पार्न खोजिरहेको छ, राप्रपाका लागि पनि उपत्यकाको जनमत उसको महत्वपूर्ण पूँजी हो । यही काठमाडौंका मतदाताले दोस्रो संविधानसभामा राप्रपालाई चौथो दल बनाइदिएका हुन् ।
दोस्रो संविधानसभामा उपत्यकाभित्र समानुपातिकतर्फको मतमा राप्रपा नेपालले एमाले र कांग्रेसलाई समेत जितेर पहिलो दल बनेको तथ्यांकमै स्पष्ट छ । यो कुरो बुझेको राप्रपालाई उपत्यकाका आफ्ना मतदाताहरु जोगाइराख्ने चुनौती छ भने अबको चुनावमा पहिलो दल बन्ने सम्भावना बोकेको एमालेका लागि उपत्यकाका मतदाताहरु आफूतिर तान्नु अपरिहार्य छ ।
तर, केपी ओली र कमल थापावीच कार्यगत एवं राजनीतिक एजेण्डाको हिसाबले पनि सहकार्यको स्थिति रहँदासम्म उपत्यकाका मतदाताहरु केपी ओलीतिर लाग्ने कि कमल थापातिर लाग्ने भनेर अल्मलिने सम्भावना रहन्छ ।
राप्रपा र एमालेको सम्बन्ध भनेको माथि सहकार्य तर तल मतदाताको वीचमा अघोषित प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन थालेको छ । २२ गतेको एमालेको शक्ति प्रदर्शनले उपत्यकामा कसैलाई सबैभन्दा चुनौती दिएको छ भने त्यो राप्रपालाई नै हो । दोस्रोमा कांग्रेसलाई र तेस्रोमा मात्रै माओवादीलाई हो ।
यस्तो थियो ०७० सालको चुनावी परिणाम
दोस्रो संविधानसभामा काठमाडौं उपत्यकामा समानुपातिकतर्फको मत परिणाममा राप्रपा नेपालले एमालेले जितेको थियो । एमाले मात्रै होइन, राप्रपा नेपालले उपत्यकाको समानुपातिक मतमा तीनवटै ठूला दलहरुलाई जितेर आफूलाई पहिलो दल बनाएको थियो । भलै प्रत्यक्षतर्फ उसले एउटा सीट पनि जितेन ।
पार्टी एकता गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा कमल थापाको पार्टीले आगामी चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ पनि राजधानीमा निर्वाचन क्षेत्रहरुमा एमाले र कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा नगर्ला भन्न सकिँदैन ।
दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ राप्रपा नेपाल काठमाडौंको क्षेत्र नं ४, ६ र १० बाहेक अन्य ७ वटा क्षेत्रमा पहिलो दल बनेको थियो । माधव नेपालको चुनाव क्षेत्रमा समेत समानुपातिकतर्फ कमल थापाको पार्टीले ओलीको पार्टीलाई जितेको थियो ।
भक्तपुरका दुई क्षेत्रमध्ये एउटाको समानुपातिक चुनावमा राप्रपा नेपालले एमालेलाई जितेको थियो । अर्कोमा राप्रपा नेपाललाई एमालेले जिते पनि राप्रपा र राप्रपा नेपालको समानुपातिक मत जोड्दा एमालेको भन्दा बढी हुन्छ ।
त्यस्तै ललितपुरका ३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुईवटामा राप्रपा नेपालले पाएको समानुपातिक मत एमालेको भन्दा बढी थियो । एउटामा एमाले अगाडि भए पनि राप्रपा र राप्रपा नेपालको मत जोड्दा एमाले पछि पर्ने तथ्यांकमा स्पष्ट छ ।